စပွန်ဆာရထားတယ်လို့ စွပ်စွဲနေသူတွေအတွက် မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ချပြလိုက်တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်း - Cele Gabar
စပွန်ဆာရထားတယ်လို့ စွပ်စွဲနေသူတွေအတွက် မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ချပြလိုက်တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်း
မြန်မာအိုင်ဒေါသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် ဂီတခရီးလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ငွေဇင်လှိုင်းကတော့ တမူးသူလေးဖြစ်သလို တမူးမြို့က မိသားစုနေအိမ်လေးကို ရဲရဲနီအောင် အလှဆင်ပြီး NLD ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ရာမှာ ပထမဆုရရှိခဲ့တာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ပထမဆုရခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့အိမ်ပုံလေးကိုတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေခဲ့သလို အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့နေနိုင်တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်းကိုတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါမှာဝင်ပြိုင်ပြီး စပွန်ဆာရလို့ အခုလို အိမ်ကြီးကြီးနဲ့ နေနိုင်တာဖြစ်ကြောင်း ပုတ်ခတ်သူတချို့လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ အခုလို မသိဘဲဝေဖန်နေကြသူတွေ အတိအလင်းသိစေဖို့ ငွေဇင်လှိုင်းကတော့ မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ချပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါလေးတစ်ခုတော့ အတိအလင်းပြောချင်ပါတယ်… ငွေဇင်တို့အိမ်ရဲ့ သက်တမ်းကိုလာကြည့်ပါ …. Idol မပြိုင်ခင်ကတည်းက ဆောက်ပြီးသားပါလို့… စပွန်ဆာ စပွန်ဆာ ဆိုတဲ့ စကားတွေ ခဏခဏ ပြန်ပြန်ကြားရတာလည်းရှိပါတယ် ပြုံးမိပါတယ်… လူတစ်ဦး တယောက်ရဲ့အကြောင်းကို သေချာမသိဘဲနဲ့ စိတ်ထင်ရာ ဝေဖန်ပီး လျှောက်ပြောနေမယ့်အစား သေချာလေးသိဖို့ စုံစမ်းလို့ရပါတယ်.. ကျမတို့အိမ်က တမူးမြို့မှာ မီးသတ်ရုံးနဲ့ကပ်ရပ်… အာရှလမ်းမကြီးဘေး ဈေးအနောက်ပေါက်မှာ ထီးထီးကြီးရယ်…
အိမ်ကြီးပဲ (၆) လုံးလောက်ရှိတာ ဒါတောင် ဆောက်နေတာ တစ်လုံးရှိသေးတယ်ရယ်… နန်းဖာလုံဈေးမှာလည်း ဆိုင်ခန်းတွေရှိတယ် သမာအာဇီဝ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေပါတယ်…တမူးမြို့တင်မဟုတ်ဘဲ မုံရွာ မန္တလေး ပြင်ဦးလွင် မူဆယ် ရန်ကုန် တင်မက အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ပြည်ထဲအထိ ကျမတို့ စီးပွားရေး တွင်ကျယ်ပါတယ်သိထားဖို့ …… ရေးလို့သာရေးရတာ ဒါတေမြင်ပီးဘောစိ ထင်မသွားကြနက် ကျမပိုင်တာမရှိဘူးရယ် ..မိဘပိုင်တာ… ကျမကတော့ မိဘလုပ်စာ ထိုင်စားနေတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုရပ်လာတာကို ဆယ်စုနှစ်ရှိနေပါပီနော် ဒီ့ထက်ပို သိချင်ရင် ထပ်ဖြေပေးမယ် ကိုယ်တိုင်တော့လာမေး…. ကျန်ခဲ့လို့ ကျမကတော့ ခုလောလောဆယ် ခွေထုတ်ပီး မွဲနေတာရယ် ဆိုပြီး အခြေအမြစ်မရှိဝေဖန်နေသူတွေ သိစေဖို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းထဲဝင်မှ ငွေဇင်လှိုင်းတို့က ပိုက်ဆံရှိလာတာ မဟုတ်ကြောင်း စပွန်ဆာရနေပြီလို့ ပြောနေတဲ့သူတွေသိစေဖို့အတွက် အခုလို အတိအလင်းဖြေရှင်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article စွန့်စားမှုအပြည့်နဲ့အလုပ်တွေကြိုးစားခဲ့တဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုပြည့်မောင်ရဲ့အကြောင်းတွေမျှဝေရင်း မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
Next Article ငွေသိန်းရာချီကို ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် အမည်မဖော်ဘဲ လှူဒါန်းပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့တဲ့ ပြေတီဦး